प्रिन्ट संस्करण - घोषणापत्रमा स्वप्निल संसार - विश्लेषण - कान्तिपुर समाचार
राजनीति सपनाहरूको खेती मात्रै हो कि त्यसका निम्ति सार्थक प्रयत्नहरूको पनि खाँचो पर्ने हो ? आफूले गरेका वाचाहरूको जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने दायित्वबाट भागेर गरिने राजनीतिबाट के अब दलहरू सुध्रेलान् ?
कार्तिक २५, २०७४-नेपाली समाजमा प्रचलित आहान छ, ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ ।’ के देशको राजनीतिक सन्दर्भमा पनि यो आहान लागू हुन्छ ? २०६४ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भययता देशले दशक लामो समय पार गरिसकेको छ र दस फरक–फरक सरकार भोगिसकेको छ । यति लामो सकसपूर्ण राजनीतिक यात्राबाट विभिन्न ध्रुवमा रहेका राजनीतिक दलहरू खोलाभन्दा छिटो फरक–फरक राजनीतिक चौबाटोमा फर्किएका छन् ।
नेपाली समाजका निम्ति रेल विकास र समृद्धि जनाउने पुरानो विम्ब हो । विसं १९८५ ताका नै गायिका मेलवादेवीले गाएको गीत ‘सवारी मेरो रेलैमा...’ होस् वा हालै विवादका बीच पनि चर्चित भनेको छक्का–पञ्जा फिल्मको ‘पूर्व–पश्चिम रेल, छुक–छुक, छुक–छुक गुडेको सपना देखेँ मैले...’ भन्ने गीत नै किन नहोस् । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, देशभित्र रेलको विकास र विस्तार नभए पनि अनेकन गीतमार्फत नेपालीहरूले रेलबारे अनेकन अनुभूति सँंगालेका छन् । सामान्यजनको यही मनोभाव बुझेर होला, प्रमुख राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा मात्रै सीमित किन नहोस्, रेल कुदाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका देखिन्छन् ।
वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा रेल सपनालाई ठूलो महत्त्व दिएका छन् । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ । यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडांै–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ । आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं र वीरगन्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । काठमाडौं लगायत अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ ।’
घोषणापत्रमा देखाइएको सपनाभन्दा वास्तविकता भने धेरै भिन्न छ । काठमाडौंमा तीन वर्षभित्र मोनोरेल कुदाउने वाचा गरेर एमालेको तर्फबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख जितेका विद्यासुन्दर शाक्यमाथि हावादारी सपना सुनाएको भनेर चर्को आलोचना भइरहँदा वाम गठबन्धनले राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिने वाचा गरेको हो । जबकि उपत्यकामा रेल कुदाउन अहिलेसम्म ठोस अध्ययन नै गरिएको छैन । करिब पांँच वर्षअघि कोरियन कम्पनी छुङसुङ इन्जिनियरिङले राजधानीमा मेट्रो रेल चलाउने सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा राजधानीभित्र ७७ दसमलव ८ किलोमिटर लम्बाइको रेल कुदाउन ५ सय ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने र परियोजना पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्न १४ वर्ष लाग्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै माओवादीले सोही घोषणापत्रमा राज्यको तर्फबाट व्यापक साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ र पाँच वर्षभित्र निरक्षरता पूर्णरूपले उन्मूलन गरिनेछ भनेर लेखेको छ । पांँच वर्षभित्र अर्थात २०६९ भित्र निरक्षरता पूर्णरूपमा उन्मूलन गर्ने उक्त घोषणाको अवस्था के होला भनेर जाँच्न सरकारी सूचकांक नै पर्याप्त छ । माओवादीको स्वप्न योजनाको चार वर्षपछि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालमा साक्षरता दर ६५ दसमलव रहेको देखाएको थियो । त्यसमध्ये ७५ दसमलव १ प्रतिशत पुरुष र ५७ दसमलव ४ प्रतिशत महिला साक्षर छन् । माओवादीले घोषणापत्रमा सार्वजनिक गरेको नौ वर्षपछिको शिक्षाको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भइसकेको छैन । २०७३ को अन्त्यमा शिक्षा मन्त्रालयले साक्षरता सम्बन्धी नयाँं कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा आगामी पांँच वर्षमा अर्थात करिब २०८० अघि नै साक्षरता दर ८७ प्रतिशत पुर्‍याउनेगरी नयाँं योजना लागू गरिएको उल्लेख छ ।
थप केही विश्लेषणबाट
आश्वासनका ठेलीकार्तिक २५, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
घोषणापत्रमा स्वप्निल संसारकार्तिक २५, २०७४पूरा पढ्नुहोस्
कस्तो बन्ला नयाँ शक्ति ?मंसिर २६, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
दिल्लीको कुहिरोमा हराएको सम्बन्धमंसिर २६, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
चित्त फाटेपछिकार्तिक २१, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
मधेस आन्दोलन अवतरणको सकसकार्तिक २१, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
शीतल निवासका सात वर्षकार्तिक १४, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
चुनौती र अवसरअसार ४, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
विश्वास बढाउने मौकाअसार ४, २०७२पूरा पढ्नुहोस्
कलाविहीन राजनीतिफाल्गुन १५, २०७१पूरा पढ्नुहोस्